We She Me: ပုပ္ပါးနတ်တောင် - ၁
| FLAGS: Mom (She) , Myanmar , Travel , We
My Wonderful Moral Thoughts - 4/13/08, 10:04 AM
I enjoy reading this post and it's remind me about my grandmum who are similar like your mum.., But it was years ago.
I have been to Bagan and Poutpar when we were back to Burma for visit on 2002. While i read your post i felt like to see the pictures in my eyes again like movie.
Look forward to have next part.
Wishing you and your family.., Happy Myanmar New Year and All the Best..,
imaginary clouds no2- 4/13/08, 1:09 PM
ကျနော်တို့ အရပ်မှာ တော်တော့်ကို မပြေလည်တဲ့ မိသားစု တစ်စုရှိတယ် ။ ဆိုပါတော့ဗျာ ဆောက်လက်စ ကန်ထရိုက်တိုက် ရဲ့ ညစောင့်သဘောမျိုးနေရာမှာ နေတယ်( အိုးပိုင် အိမ်ပိုင်မရှိတာကို ပြောချင်တာပါ ။ ) သူ့ အမျိုးသမီးက နတ်ကိုးကွယ်မူကို သက်ဝင်ယုံကြည်တယ် ။ ( နတ်ဝင်သည်လဲ လုပ်တယ် ) ၊ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ အဲဒိအချိန်က သိန်း ၃၅၀ လို့ထင်တဲ့ အစိုးရထီပေါက်တယ် ။ ခပ်ငယ်ငယ်က ထိုင်ကနားတစ်ခု ကြည့်ဖူးတယ် ။ ၁၉ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ (မိန်းမပျို)မိန်းမတစ်ယောက်က အာမီရမ် ၂ လုံးကို ပုလင်းလိုက်မော့တယ် ။ ၂ ပုလင်းကျော်ကုန်တယ် ။ ပြီးတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ။ ငယ်ငယ်က နတ်ပွဲဆို ထိုင်ကြည့်တယ် ။ ပျော်လို့ ။ မဖဲဝါ အခန်းဆို ပြေးကြ လွားကြတာ မှတ်မိနေတယ်။ နတ်ကိုယုံသလား ။ ထောက်ခံသလား ။ရှိသလား မရှိသလား ။ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းများကို ဖြေရန်မရည်ရွယ်ပါဘူး ။ကြုံဘူးတာကိုဝင်ရောက်စွပ်ဖက်ပြောဆိုတာပါ။
Kay - 4/13/08, 5:05 PM
နုနု ရည် (အင်းဝ) ရဲ့..`ပြုံး၍ လည်း ကန်တော့ခံ တော်မူပါ..ရီ၍ လည်း....´ ကို..အပြိုင် လိုက်တော့မယ်ပေါ့။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်..စောင့်ဖတ်နေမယ်။ အဲလို အတွေ့အကြုံ တွေ ..ကောင်းကောင်းသိတယ်.. အဘွားတွေ လည်း..အိမ်တွင်း ပွဲ အမြဲလုပ်တယ်.. ကျမ မှတ်မိတာတော့..ပြီးရင် ပလာတာ နဲ့သကြား စား ရတယ်..ဘာနတ်လည်း တော့ မသိဘူး။ နတ် တွေ (၀ိညဉ်) တွေ တကယ်ရှိ တယ် လို့တော့..ကျမ နားလည် တယ်။ ရှေးတုန်းက.. ရှင် ဘုရင် တွေ ရဲ့..တသွေးတသံ တမိန့် အောက်မှာ..ကွပ်မြတ်ခံ ရတဲ့..ပြည်သူ့အချစ် တော် တွေ ကို.. ပြည်သူ တွေကလည်း..ချစ်ခင် နှမြော တဲ့စိတ် နဲ့..ကိုယ်တတ်နိုင်သလို..ဆက်လက် ရှင်သန် စေ တာ လို့.. ကျမ အဖေ ကတော့..သုံးသပ် တယ်။ ချေဂွေဗားရား တို့.. ဘော့မာလေ တို့တောင်..နတ် လို့ ပြော ရမလောက်ပဲ.. ဘိုလီဗီးယား မှာ ဆို ချေ ကို..ကိုးကွယ် ကြ တယ် လို့ သိဘူးတယ်။ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ်.. အပြင် ၃၇ မင်း..အတွင်း ၃၇ မင်း ဆိုတာ..တကယ့် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမူ အမွေ အနှစ်ပဲ နော်။
nu-san - 4/13/08, 7:36 PM
အန်ဒီရေးပြထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ အမသူငယ်ချင်းတွေ အိမ်မှာ နတ်ကန်တော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှုတ်တယ်လို့ သူပြောနေသံကြားရဖူးတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတေ့ာ အိမ်နားက အိမ်မှာ နတ်ကနားပေးရင် သွားကြည့်ရဖူးတယ်။ ဘာနတ်တွေကတာလည်း ဆိုတာတော့ သိပ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခုအသက်ကြီးမှတော့ အိမ်နားမှာ ဘယ်သူမှလည်း နတ်ကနားမပေးနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အမေဆိုနှစ်တိုင်း တောင်ပြုန်းပွဲသွားရမှတဲ့။ နို့မို့ဆို တစ်နှစ်လုံးက အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီး ပြောနေသံလည်း ကြားရဖူးတယ်။
ဆက်ရန်တွေကို စောင့်ဖတ်နေပါတယ် အန်ဒီရေ...
ဝေတိုး - 4/14/08, 12:40 AM
OMG! This post reminds me of my mom and living in Kyoukpadaung for3yrs. My mom used to love that tradition. Good post about lovely old-fashioned ways. Bravo! Waiting for more.
Andy Myint - 4/14/08, 10:46 PM
မထင်မှတ်ထားဘဲ ကော့မန့်အရှည်ကြီးတွေ ရလိုက်လို့ ဆက်ရေးဖို့ အားရှိသွားပြီ။
ကျေးဇူးပါ မစိုးမြတ်နန္ဒာသက်လွင်။ သွားဖူးတော့ ပိုခံစားလို့ ရတာပေါ့။
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ဆရာတိန် ခေါ်မယ် ကိုယ့်လူ။ `ထိုင်ကနား´တို့ `နတ်ဝင်သည်´တို့လို မေ့နေတဲ့ စကားလုံးတွေ ပြန်ခေါ်ပေးတဲ့ အတွက်။
မလုပ်ပါနဲ့ မကေ... နုနုရည်(အင်းဝ)ကိုတော့ ခြေဖျားမီရင် ကံကောင်း။ ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်က သူ့ ၀တ္ထုတွေဆို တစ်အုပ်ပြီး တစ်အုပ် ဖတ်ဖူးတယ်။ ကြိုက်တယ်။ နတ်နဲ့ သူရဲကောင်း အကြောင်းက မှတ်သားစရာပဲ။ အစ်မကို ကုတ်ပါရစေ။ အစ်မပြောသွားတာတွေကို (Quote) ယူသုံးမယ် ပြောတာ။
နတ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လူတွေက အဲလိုပဲ မနုစံရေ။ ကောင်းလည်း နတ်မလို့ နတ်ကို ပူဇော်ချင်တယ်။ ဆိုးလည်း နတ်မအောင် ပူဇော်ကြတယ်လေ။ နတ်ကနားက အစိုးရက လူစုမှာ စိုးလို့ တားမြစ်ထားကတည်းက ပေးလို့ မရတော့ဘူးလေ။ နယ်တွေမှာတေ့ လုပ်လို့ ရတယ် ထင်တယ်။
ကျေးဇူးပါ ကိုဝေတိုး။ အမေ့ကို သတိရလို့ ရေးလိုက်တာ ကိုဝေတိုးအတွက်လည်း သတိရစရာတွေ ဖြစ်သွားတယ်။
Soe - 4/15/08, 1:56 PM
Andy Myint - 4/22/08, 12:12 AM
အရင်တုန်းက မြန်မာတွေ တော်တော်များများ လုပ်ကြတာဆိုတော့ ရိုးရာလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့ မစိုး။ အမေတွေ လုပ်ကြတာလေ။
ကိုဆုကြည် - 1/13/09, 5:04 AM
(အရက်မျိုးကိုစုံလို့ပါပဲ၊ အာမီရမ်၊၀ီစကီ၊ အရက်ဖြူ၊ ဘီယာ၊ ထန်းရည်တောင်ပါလိုက်သေးတယ်)ကြက်ကြော်လည်းပါတယ်
သားတော်ကြီးကသာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာ။ ညနေလည်းရောက်လို့ နတ်ပွဲလည်းပြီးရောသားတော်ကြီးလည်း
ခေါင်းတောင်မထောင်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။ ကောင်းလိုက်တာမှ ခေါင်းတွေကိုက်တာ နောက်နေ့ထိပါပဲ၊ ကိုယ်တွေ့ပါဗျာ။
shwezinu - 12/1/09, 9:16 PM
Anonymous - 4/24/10, 12:17 AM
နတ်ကိုလုံးဝမကိုးကွယ်တတ်ပါ ငယ်ငယ်ကအရမ်းမုန်းပါသည် အခုတော့အမျှဝေပေးသင့်သူတွေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းရှိသူတွေဟုမြင်ပါသည် ဘုရားသာသနာကိုအားကိုးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်လုံးဝကိုးကွယ်စရာမဟုတ်ပါ ကျနော့်အမြင်သပ်သပ်သာဖြစ်ပါသည်
နတ်ပွဲကတော့သီချင်းသံကြောင့် စိတ်ဓာတ်တက် စေပြီးတော်တော်ကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုပါ
Kyaw Zey - 4/26/10, 9:46 PM
Andy Myint - 4/26/10, 10:37 PM
ဘာမှ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ ကျော်ဇေ။ အခု အမေလည်း အသက်ရတော့ ဘုရားနဲ့ တရား အစစ်အမှန်နဲ့ပါ။ အရင်တုန်းက အမေ့ အကြောင်းတွေ အမှတ်တရ ရေးထားတာပါ။ ဒါ မြန်မာပြည်က အရင်ခေတ်က မိန်းမတချို့ရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်လူလေသံကိုတော့ မကြိုက်လှပါဘူး။
မင်းညို - 4/27/10, 4:10 PM
ကျွန်တော့်အဖိုးအဖွားတွေက သီတင်းကျွတ်ရောက်တိုင်း နတ်တင်တယ်ဗျ..မုန့်ဖြူ၊ မုန့်နီ၊ မုန့်လက်ကောက်ကွင်း၊ အုန်းစာမုန့် စတဲ့ မုန့်မျိုးစုံစားရတယ်။ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျ..။ ကျွန်တော့်ရွာမှာတော့ နှစ်စဉ် မပျက်လုပ်ကြတဲ့ ပျော်စရာဓလေ့တစ်ခုလိုပါပဲ ဖြစ်နေပြီ..။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင် နိုင်သလောက် မုန့်ကောင်းကောင်းလုပ် နတ်တင်၊ လာတဲ့လူကျွေးပေါ့။ မတတ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်း ကိစ္စ မရှိဘူး ''ကိုး'' လိုက်တာပဲ။ ကိုး တယ်ဆိုတာတော့ အဆင်ပြေတဲ့အခါ ကောင်းကောင်း တင်ပါ့မယ် ဘာညာပေါ့ဗျာ..။ ဒီလိုပဲ အကြွေတစ်မတ်စေ့နဲ့ အထက်သွားမလားဟေ့ မေးပြီး သွားမယ်ပြောလိုက်ရင် အဲဒီတစ်မတ်စေ့ ပေးပြီး တင်တဲ့သူတောင်ရှိသေး...။ အဲဒါလည်း နတ်တင်တာပဲ။